Uyini umcimbi weLa Niña | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Cishe uke wezwa ngesimo sezulu esaziwa njenge-El Niño ngonyaka odlule. Okungenzeka ukuthi awazi ukuthi kukhona into ephikisana ngokuphelele ethola igama likaLa Niña futhi lokho kuvame ukwenzeka ngalezi zinsuku, uma isiphetho se-El Niño sesiphelile.
Ngemuva kwalokho ngizokutshela okwengeziwe ngeLa Niña ne yemiphumela eliyivezayo ezindaweni ezahlukahlukene zeplanethi.
Isimo seLa Niña ngokuvamile sibangela ukwehla okukhulu kwamazinga okushisa nezikhathi ezinamandla zesomiso ezindaweni eziseduze nePacific. Imvamisa ihlala izinyanga ezimbalwa futhi okukhulu kakhulu kwenzeka ngonyaka we-1988/1989.
Mayelana nemiphumela eyikhiqizayo, kufanelekile ukuqaphela ukuqiniswa kwemimoya ye-alder edala ukuthi ulwandle lwehle ogwini lwaseColombia, e-Ecuador nasePeru. Kukhona ukugxila kwezinga lokushisa eliphakeme olwandle lwendawo eseningizimu ye-Pacific okudala ukuhwalala okukhulu nemvula enamandla kakhulu.
Isimo seLa Niña sikhulu kakhulu ngenkathi sithatha isikhathi esincane futhi umthelela omkhulu kakhulu uvame ukwenzeka ezinyangeni zokuqala zalesi senzakalo. Ngokungafani no-El Niño, iLa Niña yenzeka kaningi esikhathini seminyaka emi-4 ukuya kwengu-7.
Ngokuya ngemininingwane yakamuva evela kochwepheshe ngale ndaba, isimo se-El Niño siyaphela ngenxa yokuthi ulwandle luyaphola, Kodwa-ke, leli qiniso liyinkomba yokufika kwesimo esishiwo ngenhla seLa Niña. Izibikezelo zochwepheshe bezimo zezulu azizinhle neze futhi kubonakala sengathi iLa Niña ingahle ibe yimbi kakhulu kuno-El Niño uqobo. Kuzofanele silinde amasonto ambalwa ukuze sazi ubukhulu bale nto kuphambene ngokuphelele nomkhuba odumile we-El Niño.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uyini umcimbi weLa Niña?